Iindaba -Ibhotile yeglasi enokuphinda isebenze
Kukho iibhotile zeglasi kwilizwe lam ukusukela kumaxesha amandulo. Kwixesha elidlulileyo, izangqa zemfundo zazikholelwa ukuba iiglasiware zazinqabile kumaxesha amandulo, ke kufanelekile ukuba ibe yeyabanini kwaye isetyenziswe ziiklasi ezimbalwa ezilawulayo. Nangona kunjalo, uphononongo lwakutsha nje lukholelwa ukuba iiglasi zakudala akunzima ukuvelisa kunye nokwenza, kodwa akukho lula ukuyigcina, kungoko kunqabile kwizizukulwana ezizayo. Ibhotile yeglasi sisitya sokupakisha sesiselo kwilizwe lam, kwaye iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha ezinembali ende. Ngobuninzi bezinto zokupakisha ezithululela emarikeni, izikhongozeli zegilasi zisesikhundla esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingazukubuyiselwa ezinye izinto zokupakisha.
Ukusetyenziswa kweglasi ukwenza izikhongozeli zokupakisha kunembali ende, kwaye imveliso enkulu yemveliso yeebhotile zeglasi kunye neenkonkxa ibingumbandela phantse weminyaka elikhulu. Njengezinto zokupakisha, iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa zineenzuzo ezininzi, ezinjengezinto ezibonakalayo ezingafunekiyo, amaxabiso asezantsi, ukucaca okuphezulu, kunye nozinzo lweekhemikhali. Iyaphefumla, ayitshintshi umbala, inokuvulwa ize ivalwe amatyeli amaninzi, kwaye inokuphinda isetyenziswe iphinde isetyenziswe kwakhona; nangona ibuthathaka kwaye inzima, iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa bezisoloko zibalulekile kwizikhongozeli zokupakisha. Ukusetyenziswa okukhulu kweebhotile zeglasi kunye neenkonkxa kuye kwenza ukuba ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kunye nokusetyenziswa kwakhona kubaluleke ngakumbi. Ngokubanzi, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa kulula kunokupakisha izikhongozeli ezenziwe zezinye izinto, kwaye kufuneka zicocwe kuphela ngaphambi kokuba ziphinde zisetyenziswe. Umzi mveliso weglasi usebenzisa inkunkuma eyilahlekileyo njengezinto ezingafunekiyo, ezinezibonelelo ezibonakalayo kwindalo. Amandla anokuncitshiswa. Sebenzisa i-4% ukuya kuma-32%, unciphise ungcoliseko lomoya ngama-20%, unciphise inkunkuma yezimbiwa ngama-50%, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngama-50%. Ukuqala ekukhuseleni okusingqongileyo kunye nokukhusela izixhobo, amazwe kwihlabathi liphela akhuthaza ukusetyenziswa kwakhona kweebhotile zeglasi kunye neenkonkxa.
Umthamo wokurisayikilisha kweebhotile zeglasi uyanda minyaka le, kodwa obu buninzi bokurisayikilisha bukhulu kwaye abunakulinganiswa. Ngokwe-Glass Packaging Association: Amandla agciniwe ngokusetyenziswa kwakhona kwebhotile yeglasi angenza i-bulb ye-watt eyi-100 ilayite malunga neeyure ezi-4, usebenze ikhompyuter imizuzu engama-30, kwaye ubukele imizuzu engama-20 yeenkqubo zeTV. Ke ngoko, ukurisayikilisha iglasi ngumba obaluleke kakhulu. Ibhotile yeglasi yokurisayikilisha isindisa amandla kwaye inciphisa amandla okulahla inkunkuma, enokuthi ibonelele ngezinto ezingasetyenziswanga kwezinye iimveliso, kubandakanya neebhotile zeglasi. NgokweNgxelo yeSizwe yeBhotile yabaThengi yePlastiki yeMveliso yeMichiza yase-United States, malunga neebhiliyoni eziyi-2.5 zeebhotile zeplastiki zaphinda zaphinda zaphinda zaphinda zasebenza ngo-2009, ngomlinganiselo wokuphinda kusetyenziswe kuphela iipesenti ezingama-28. Ukurisayikilisha iibhotile zeglasi kulula kwaye kuyanceda, ngokuhambelana nezicwangciso zophuhliso ezizinzileyo, kunokonga amandla kwaye kukhusele izibonelelo zendalo.